कसरी ट्रस्ट एसईओ मा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ - Semalt विशेषज्ञ
हाम्रो श्रृंखला को माध्यम बाट एसईओ को तीन स्तम्भहरु मा अधिकार र प्रासंगिकता छलफल भएको छ र अब विश्वास छलफल हुनेछ। विश्वास के हो, र भरोसाले SEOलाई कसरी असर गर्छ? विश्वास को महत्व को व्याख्या गर्न को लागी सरल छ। हाम्रो दैनिक जीवन हेरौं। हामीलाई विश्वास चाहिन्छ; वास्तवमा हामी आफूले गर्ने सबै कुरामा विश्वास प्रयोग गर्दछौं। हाम्रो मनपर्दो कफी स्पट हाम्रो मनपर्दो अखबार विक्रेता छनौट गर्नबाट, हाम्रो निर्णयहरू यी सेवा प्रदायकहरूमा विश्वासको स्तरबाट प्रभावित हुन्छन्। हाम्रो दैनिक जीवनमा विश्वास आवश्यक छ, र यो भरोसाले हामी कससँग कुरा गर्न रुचाउँछौं, हामी कहाँ जान रुचाउँछौं र कुन सूचनाको स्रोतहरूमा विश्वास गर्छौं भन्ने कुरामा हाम्रो निर्णयहरूमा प्रभाव पार्छ। यदि विश्वास हाम्रो लागि यति धेरै हुन्छ भने, यो आशा गरिन्छ कि विश्वासले तपाईंको वेबसाइटको खोज ईन्जिन र इन्टरनेट दुबैको धारणामा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
SEO ट्रस्ट हो
विश्वास निर्माण गर्न गाह्रो छ, र यो नष्ट गर्न सजिलो छ। SEO विशेषज्ञको रूपमा, हामीले यस अमूर्त बन्धनको निर्माणको रहस्य पत्ता लगाउन आवश्यक छ? यसबाहेक, हामी हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्छौं के अनलाइन विश्वास को आधार रूप।
वेबसाइटहरूले विश्वास स्थापना गर्न आवश्यक पर्दछ, विशेष गरी अनलाइन मार्केटिंगको साथ, खोज इञ्जिनहरू र वेब प्रयोगकर्ताहरूलाई विश्वस्त गर्न कि उनीहरूले उत्तम सम्भव सेवाहरू वा सूचना प्रस्ताव गर्छन्। अर्कोतर्फ, खोजी ईन्जिनहरूले स्थापना गर्न एउटा मार्ग आवश्यक पर्दछ जुन साइटलाई वेबसाइटमा मान दिन विश्वासयोग्य छ। खोज ईन्जिनको दृष्टिकोणबाट, तिनीहरू डोमेन उमेर, अपडेटहरूको फ्रिक्वेन्सी, त्यो वेबसाइटको ट्राफिक, वा यसको लोकप्रियता, र यसको सामग्रीको आधारमा विश्वास पहिचान गर्दछ। यदि वेबसाइटको यी प्रत्येक वस्तुमा उच्च स्कोर हुन सक्छ, त्यो वेबसाइट गुगलको पहिलो पृष्ठमा देखा पर्नेछ किनकि त्यसले गुगललाई राम्रो देख्नेछ। हामी अझै नयाँ समस्याको सामना गरिरहेका छौं, जुन यो विश्वास कमाउँदै छ।
बिल्डिंग ट्रस्ट पार्कमा हिड्नको लागि होइन, यो समय खपत गर्ने र चुनौतीपूर्ण काम हो, तर यदि तपाईंको वेबसाइटले उक्त विश्वास कमाउँछ भने यो प्रयासको लागि योग्य छ। SEO SEO ट्रस्ट निर्माण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। यो तपाईको वेबसाइटलाई अनुकूलित गर्नका लागि फाइदाजनक छ, यो एक चीज हो जुन प्रभाव लिन लामो समय लाग्न सक्छ, तर SEO विश्वास बिना, तपाइँको वेबसाइट पीडित हुन बाध्य छ।
हामीले उल्लेख गरेझैं मानव सम्बन्धहरू भरोसामा निर्भर हुन्छन्, र खोज इञ्जिनहरूले त्यस्तै प्रकारले काम गर्दछ जब उनीहरूले साइटको विश्वसनीयतालाई निर्धारण गर्छन्। एउटा तरिका उनीहरूले यो गर्छन् "तपाईको वरपरको कम्पनी" लाई मूल्या by्कन गरेर। तपाईको कम्पनी द्वारा, हामी तपाईले लि link्क गर्ने वेबसाईट र साइटहरु जुन हामीले लिंक गर्छौं। कुन सामग्रीले तपाइँको सामग्री साझा गर्दछ? र यी अधिक प्रश्नहरूको संकेतको रूपमा प्रयोग गरिन्छ जसले खोज ईन्जिनलाई मद्दत गर्दछ कि तपाइँको वेबसाइटलाई भरोसा गर्नुपर्दछ कि पर्दैन। यो विश्वास भंग भए पछि गुगलले त्यस्तै प्रकारले प्रतिक्रिया गर्दछ जुन हामीले विश्वास गर्छौं जब हाम्रो विश्वास भ .्ग हुन्छ।
कसरी खोजी ईन्जिनहरूको विश्वास प्राप्त गर्ने
नयाँ वेबसाइटको रूपमा, यो विश्वास अधिग्रहण गर्न चुनौतीपूर्ण छ किनकि तपाईंको डोमेन जवान छ, र गुगलले तपाईंलाई विश्वास गर्ने कुनै कारण छैन। त्यसो भए तपाईले गर्न सक्ने पहिलो कुरा भनेको लि acquire्क प्राप्त गर्नु हो। पहिले नै विश्वसनीय साइटहरूबाट गुणस्तरको लिंकहरू प्राप्त गरेर, तपाईं Google लाई आफ्नो साथीहरू को लागी देखाउनुहुन्छ, जो तपाईं को हुन् भनेर देखाउन लामो यात्रामा जान्छ। तपाईको सामग्रीमा सान्दर्भिक लि and्कहरू र सुरक्षित जडानहरू प्राप्त गरेर, तपाइँ प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि तपाइँ खोजी इञ्जिनहरूद्वारा क्रमबद्ध हुन योग्य हुनुहुन्छ। आज, लिंकको गुणस्तर फेला पार्न कुनै गाह्रो छैन Google द्वारा प्रदान गरिएको धेरै उपकरणहरूमा। तपाईको लिंक निर्माण गर्दा, तपाईले कमजोर विश्लेषण लि using्क प्रयोग गरिरहनु भएको छैन भनि निश्चित गर्न यस्तो विश्लेषणका लागि आँखा बाहिर राख्नु पर्छ।
यदि तपाईंसँग एक वेबसाइट छ भने, तपाईंलाई सम्भवतः थाहा छ कि यो तपाईंको सामग्री अपडेट गर्न अनि नियमित रूपमा आफूलाई पुन: सार्न आवश्यक छ। यदि तपाईं नयाँ सामग्री एक पटकमा राख्न असफल भएमा, तपाईंको वेबसाइटले यसको हालको रैंक गुमाउन सक्छ। गुगल र अन्य खोज ईन्जिनहरूले ताजा सामग्री हेर्न रुचाउँछन्, जसले तपाईंको बाउन्स दरहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
ट्रस्ट फ्याक्टर के हो?
गुगलको ट्रस्ट फ्याक्टर अरू धेरै कारकहरूको संयोजन हो जुन उनीहरूले विचार गर्छन् वेबसाइट कसरी भरोसायोग्यमा ट्याग लागू गर्दा। यस बिन्दुमा हामीले भन्नु पर्छ एक साइट अधिक विश्वासनीय छ, अधिक संभावना यसको लेखहरू गुगल SERPs मा राम्रो दर्जा दिनेछ। हामी केहि कारकहरूको पनि उल्लेख गर्नेछौं जुन तपाईंको वेबसाइट कम विश्वसनीय, हानिकारक वा कम गुणस्तरको देखिन्छ।
पृष्ठ ट्रस्ट फ्याक्टरमा के प्रभाव पार्छ
यहाँ केहि कारकहरू छन् जुन प्रभावकारी छन् वेबसाइटमा कति भरोसा दिइन्छ।
के तपाईंको साइटमा गोपनीयता नीति, सर्तहरू, र खुलासा जस्ता चीजहरू छन्? प्रायजसो हामी वेबसाईटमा जाँदा त्यस्ता प्रम्प्टहरूलाई बेवास्ता गर्दछौं, तर के तपाईंलाई थाहा छ तिनीहरू आवश्यक छ? यद्यपि उनीहरू SEO को रूपमा कार्य गर्दैनन्, तिनीहरूले प्रमाणित गर्दछ कि तपाईंको वेबसाइट वैध हो, तपाईंलाई अधिक विश्वास कमाउन मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ साइट को मालिक को हो र सम्पर्क हामीलाई पृष्ठ मा जानकारी मा एकता हुनुपर्दछ।
तपाइँको वेबसाइट मा लेख को लम्बाई। अब यहाँ एक ट्रिक छ जुन तपाईले प्राय: जसो देख्न सक्नुहुन्न, तपाईको सामग्री लामो, राम्रो, वेब सामग्रीको लागि। तपाइँको वेबसाइटमा उत्कृष्ट सामग्री राख्नु, जुन नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन्छ, गुगलमा विश्वसनीयताको संकेत हो।
के तपाईसँग कुनै अनन्त लिंकहरू छन्? विश्वास प्राप्त गर्न, तपाईंले ट्रस्टबाट अन्य वेबसाइटहरू साझेदारी गर्न आवश्यक पर्दछ, पहिले नै अधिकार रहेको। विश्वासयोग्य एक उत्कृष्ट वेबसाइट खोज्नको लागि, गुगल खोजी परिणामहरूमा पहिले नै राम्रा दर्जा राख्ने साइटहरू खोज्नुहोस्। यो काम गर्दा, वेबसाइटहरू लिंक गर्न नबिर्सनुहोस् जुन तपाईंको प्रतिस्पर्धा होइन किनभने यदि तपाईं त्यसो गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले त्यस्ता वेबसाइटहरूको लागि विज्ञापन चलाउन पनि सक्नुहुनेछ। लिंक गर्न वेबसाइटहरूको एक राम्रो उदाहरण विकिपीडिया साइट वा एक सरकारी वेबसाइट हुन सक्छ।
के तपाइँसँग तपाइँको वेबसाइट मा भिडियो सामग्री छ? कसरी तपाइँको आगन्तुकहरु व्यस्त राख्न को लागी हाम्रो लेख मा, हामी एक वेबसाइट को लागी भिडियो को महत्त्व छलफल। तपाइँको वेबसाइट मा अधिक भिडियो को साथ, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को उच्च पद प्राप्त गर्ने संभावना वृद्धि। यो सामान्यतया सबै भन्दा राम्रो समीक्षा र उच्च रेटिंगका साथ तपाईले युट्युबबाट भिडियोहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। गुगलले दुबै यूट्यूब र खोज इञ्जिनको स्वामित्व राखेको हुनाले तपाईं त्यस्ता भिडियोहरूको लोकप्रियता र विश्वासबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको दर्शकहरूलाई तपाईंको साइटमा लामो समय बस्न पनि मनाउँछ।
पेशेवरको रूपमा, Semalt यस जस्तो सर्तहरूसँग परिचित छ। यदि तपाईं एसइओमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग दुई पटक "गुणस्तर लि get्कहरू" हुनुपर्दछ। एक वेबसाइट मालिकको रूपमा, गुणवत्ता लि links्कहरू प्राप्त गर्नु तपाईंको लागि विश्वासयोग्य छवि निर्माण गर्ने सब भन्दा द्रुत तरीका हो। दुर्भाग्यवस, यो विश्वास प्राप्त गर्न को लागी सबैभन्दा कठिन तरिका मध्ये एक हो। उच्च-गुणवत्ता लि links्क प्राप्त गर्न गाह्रो छ। गुणवत्ता लि links्कहरू प्राप्त गर्न, तपाईंको सामग्री अपवादात्मक हुनुपर्दछ। राम्रो गुणस्तरको सामग्री सिर्जना गरेर, अन्य ठूला र स्थापित वेबसाइटहरूले o तपाईंको वेबसाइटलाई उनीहरूको सामग्रीमा लिंक गर्न निर्णय गर्न सक्दछन्, जसले तपाईंलाई दुबै ट्राफिक र विश्वास दिन्छ। किनकि तपाईंको सामग्री तिनीहरूलाई र उनीहरूका पाठकहरूको लागि उपयोगी थियो, तपाईंको लिंक तपाईंलाई सन्दर्भ वा प्रशंसाको फारमको रूपमा लिन्छ, तर हामीले भने जस्तै विश्वासले समय लिन्छ, त्यसैले यो तुरुन्तै हुने आशा नगर्नुहोस्। उच्च-गुणस्तरको लिंकहरू निर्माण गर्नु लामो प्रक्रिया हो।
तपाईंले लि links्कहरूको सम्भाव्यता देखिसक्नु भएको छ भने, तपाईंलाई कम-गुणवत्ता लि spam्कहरू स्पाम नल्याउन चेतावनी दिन बुद्धिमानी हुनेछ। यो किनभने यस्तो एसईओ लुफोलले अबदेखि साइट श्रेणीलाई मद्दत गर्न सक्दैन। गुगलले यसको एल्गोरिथ्म अपडेट गर्‍यो कि त्यस्तै कार्यहरूलाई वेबसाइटको दर्जामा प्रभाव पार्नबाट रोक्न। धेरै वर्ष पहिले, न्यून-क्वालिटी लि having्कहरू राख्नु तपाईंको वेबसाइट स्तरलाई सकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्ने राम्रो तरिका हो। जे होस्, यदि तपाईले आज धेरै लिंकहरू पोष्ट गर्न प्रयास गर्नु भयो भने तपाई केवल गुगलको क्रोध भोग्नुहुनेछ। कम-गुणवत्ता ब्याकलिंक्स राम्रो भन्दा बढी हानि कारण।
तपाईंको कारक फ्याक्टरलाई असर गर्ने थप कारकहरू
अन-पेज ट्रस्ट र अफ-पृष्ठ ट्रस्टलाई एसाइड गर्दछ, तपाईंसँग धेरै अन्य कारकहरू छन् जसले तपाईंको विश्वास तत्वलाई असर गर्दछ। तिनीहरू मध्ये केही हुन्:
सामाजिक मिडिया गतिविधिहरू। सोशल मिडिया हाम्रो जीवनको एक महत्वपूर्ण पक्ष भएको छ। आजका दिनहरूमा गुगलले वेबसाइटमा रहेका सामाजिक मतहरूको संख्याका लागि नजर राख्छ। यो तपाइँको ब्रान्डहरु मा हेरी यो गर्छ; फेसबुक शेयर साझा टिप्पणीहरू, आदि मनपराउँदछ तपाईंको साइट मा अधिक सामाजिक उपस्थिति, सुरक्षित गुगल तपाईंलाई विश्वास लाग्छ। तपाईंको साइट रैंकिंग सुधार गर्न, सामाजिक मिडिया खाताहरू सिर्जना गर्नुहोस्, र तिनीहरूमा सक्रिय रहनुहोस्। केवल यो मात्र गुगल तपाईं मद्दत गर्दछ, तर तपाईं आफ्नो सम्भावित आगन्तुकहरु लाई अधिक जोखिम पनि अनुभव गर्नु हुनेछ।
व्यक्ति तपाईंको साइटमा कति लामो समय सम्म रहन्छ? गुगलले यसलाई पनि विचार गर्दछ। के तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले तपाईंको वेब सामग्रीको गुणस्तरको बारेमा उल्लेख गर्‍यौं? यो जहाँ यो खेल आउँछ। विश्वास निर्माण गर्दा प्रासंगिकता पनि महत्त्वपूर्ण छ। सान्दर्भिक सामग्रीको साथ, आगन्तुकहरूले तपाईंको साइटमा अधिक समय बिताउँछन्, र यो गुगलमा राम्रो संकेत हो जुन तपाईंको साइटलाई भरोसा गर्न सकिन्छ।
तपाईंको साइटको ट्रस्ट फ्याक्टर बढाउँदै तनावपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले हामी एक Semalt तपाइँलाई सहयोग गर्न यहाँ छन्। यो प्रक्रिया सम्बन्धित हुन सक्छ, र तपाईं यसलाई धैर्यता मार्फत मात्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो अधिक लायक छ तपाईले अधिक यातायात र SERP को १-पृष्ठ प्रभुत्वको आनन्द लिन शुरू गर्दा। याद गर्नुहोस्, यसमा कुनै सर्टकटहरू छैनन् किनकि गुगलले कुनै पनि साइटलाई सजाय दिनेछ जसले राम्रो क्रम निर्धारण गर्न ट्रिकहरू प्रयोग गर्न कोशिस गर्दछ। जब तपाईंसँग राम्रो विश्वास कारक मान छ, तपाईंले आफ्नो साइटको प्रतिष्ठा सुधार गर्नुभयो।